Iadrenaline Hydrochloride Inaliti - China Ningbo Second hormone
Iadrenaline Hydrochloride Inaliti [Inkcazelo] Lo imveliso ulwelo ezingenambala okanye phantse enemibala ecacileyo. [Umsebenzi kunye Sebenzisa] Le mveliso omabini isebenze ifuthe receptor α kunye β receptor. receptor α vuliwe inokukhokelela ucutheko yesikhumba, isifo kunye isitya visceral; β receptor kusebenze kungakhokelela angiectasis of kwemithambo, uchulumanco zihlunu skeletal kunye izihlunu kwentliziyo, ukunyuka izinga lentliziyo kunye nokuphumla zihlunu egudileyo bronchus kunye pepa zesisu ...
Le mveliso ulwelo ezingenambala okanye phantse enemibala ecacileyo.
Le mveliso iye zombini isiphumo isebenze of α receptor kunye β receptor. receptor α vuliwe inokukhokelela ucutheko yesikhumba, isifo kunye isitya visceral; β receptor kusebenze kungakhokelela angiectasis of kwemithambo, uchulumanco zihlunu skeletal kunye izihlunu kwentliziyo, ukunyuka izinga lentliziyo kunye nokuphumla zihlunu egudileyo bronchus kunye nesiqephu zesisu. kwifuthe lazo uxinzelelo lwegazi inxulunyaniswa umthamo wayo, idosi yayo eqhelekileyo kunokubangela uxinzelelo iSystolic ukunyuka ngaphandle ibangela uxinzelelo ukuzala ukuya phezulu okanye kubangele ukuba behle kancinci; umthamo yayo enkulu kunokubangela zombini xi iSystolic kunye noxinzelelo ukuzala ukuya phezulu. Oku ikakhulu esetyenziselwa uncedo zokuma ngesiquphe kuqala kunye kothula uphawu kwezifo ezinzima anaphylaxis, oko enokusetyenziselwa urticaria, ukugula serum kunye nokudumba angioneurotic kunye asthma inyumoniya njalo, kuba nalo luqhele ukusetyenziswa ne iintlungu bendawo ukoluka ixesha Ukubulawa yasekuhlaleni.
Inaliti ongama: idosi enye, 2-5ml ngehashe iinkomo; 0.2-1.0ml lezimvu ezihagwini; 0.1-0.5ml ngokuba inja.
Inaliti efakwa: idosi enye, 1-3ml ngehashe iinkomo; 0.2-0.6ml lezimvu ezihagwini; 0.1-0.3ml ngokuba inja.
[ Akaziphatha R eaction ]
Le imveliso Ingabangela imincili, ukuphazamiseka, ndiba, emhlanzweni, lwegazi (phezu umthamo), arrhythmia njalo njalo. Inaliti okuphindwayo kunokukhokelela necrosis yasekuhlaleni.
fibrillation Ventricular ingabangelwa xa le mveliso isetyenziswa ne iintlungu jikelele ezifana chloral ukuphilisa. Oku akuvumelekanga ukuba co-isetyenziswe kunye digitalis kunye nokulungisa amayeza calcium noba.
Kuya kusetyenziswa ngokuqaphela yesifo eziphilayo intliziyo, hyperthyroidism, Njengokungeniswa zonxinzelelo kunye ukopha njalo njalo.
3. Le mveliso ayiyi kusetyenziswa xa kutshintshwe ngombala.
Kuya ukuthintelwa bakrotyiswe ekukhanyeni kwaye igcinwe ikwimeko moya emthunzini (ngezantsi 20 ℃)
Okulandelayo: Ceftiofur Sodium for Inaliti
Andrenaline Hydrochloride Inaliti